Mala nooshahay tacadi mase taqana qof la nool xaalad tacadi ama bahdilaad? Xita waqtigaan adag ee karantiilka lagu jiro hadana waxaa jira wadooyin badan oo aad kaga bixi karto xalada gumeeysiga iyo tacadiga aad ku nooshahay, weydiiso caawinaad, si laguu saacido xaalad dagan iyo meel goob sir ah oo kagula tacalo xalkaga ilalisana sirtada iyo amnigadaba, iyo aaminaad hubaal ah.
Nambarka bilaashka ah 1522 (Wicitaan iyo maseej whatsapp) 24 saac luqadaha diyarsan(Talyani,Ingiriis,Faransiis, Isbaanish iyo Carabi) wuxuna u furanyahay qof walba oo tabanayo Tacadi.
Nambarka bilaashka ah 800290290 24saac, kaso u gaar dadka dhibaneyasha lagu shaqeestay xuquuq la’aan.
Waxaa kaloo jirop ablikeeshan la dhaho App – YouPol
BAHDILADA XUQUUQDA ADANAHA WAA XAALAD XUN OO XAGA SHARCIGA AH
HADII AAD KU NOOLEED AMA KU NOSHAHAY GUMEYSO WAA LAGU CAAWIN KARAA
WAC NAMBARKA 800290290
SI BILAASH AH -XORNA AH FURAN 24 SAAC
Talyaaniga waxa jiro adeegyo badan oo iyo ilaalin saacidaad dadka ku nool ama kusoo noolaaday nolol cabiidsi ah ama bahdilaad leh. Adeegyadaas waxa ka mid ah in lagu siiyo adeeg kuu gaar ah, guri ad ku noolaato kaasoo eeysan cidina ogaan doonin si loo ilaaliyo xalkaga guud. Hadii aad tahay dhibane u bahan waxan kugu xiri karna kuwa ku saacidi karo kuna sharaxo sharciyada iyo qeynuunka eeyku shaqeyaan.
Waxaad ugu tagi karta xita kaliya in aad war bixin kooban kasoo hesho
Hadii aad ku sugantahay xalkan waxa awoodaa:
Hel war bixin iyo sharci ku saabsan xaqa aad leedahay.
Hel adeeg caafimaad oo aad u baahantahay
Hel goob aaku noolato oo sir ah hadi aad amaankaga u baqdo
Weydiiso codsi dowlada Talyaaniga si aad usii joogto wadanka ama aad u badalato Sijoornada
Hadii aad dooneyso inaad ku labato wadankaga waxa lagugu saacidaya qaab ilaalinayo xuquuda qofka iyo borojeed saacido qofka labanayo.
J.R, 22 jir
“Waxaan soo galay safar aad u dheer sababto ah aabahey ayaa goansaday in aan Yurub imaado si aan u saacido reerkeena, hada waxan shaqeya 10 sacadood maalinki isbuuca oo dhan maalina kama nasto, waxana ku noolahay goobta an ka shaqeeyo, welina waaan gudaa deenti la igu keenay isla qofki i keenay aana i geeyay shaqada”.
M.H, 18 Jir
G.S, 20 jir